Nahoana Coinbase Voampanga ho overloading ny Bitcoin harato sy ny fomba asa SegWit ? - Blockchain News
Febroary 12, 2018 Admin
Nahoana Coinbase Voampanga ho overloading ny Bitcoin harato sy ny fomba asa SegWit ?
Ary firy Coinbase injeniera no ilaina mba hampidirana SegWit.
tamin'ny Febroary 5, ny Coinbase Cryptocurrency fifanakalozana nametraka bitsika, mampahafantatra fa “ny fampandrosoana amin'ny ekipa dia dingana farany ny fitiliana SegWit”, ary “fandefasana sy fandraisana BitCoins amin'ny fanohanana SegWit dia ho hita ao anatin'ny herinandro vitsivitsy”.
Coinbase nanambara ny asa amin'ny SegWit tamin'ny fiandohan'ny volana Desambra tamin'ny taon-dasa, namaly iray amin'ireo matetika nanontany fanontaniana avy amin'ny mpampiasa “firy Coinbase injeniera no ilaina mba hampahafantatra SegWit.”
tamin'ny Desambra 16, Coinbase filoha lefitra Romero Dan dia namoaka lahatsoratra iray ao amin'ny bilaogy ofisialy Coinbase, mampahafantatra fa ny fampidirana ny SegWit no nomanina ho an'ny 2018, ary amin'izao fotoana izao ny ekipa dia “miasa eo amin'ny fampiharana ny SegWit azo antoka.” Romero dia manamafy fa “ao amin'ny laharam-pahamehana – fiarovana sy ny asa mahomby ny fifanakalozan-kevitra”, ary tsy miresaka manokana momba ny teny.
Na izany aza, ny alon-Desambra “Bitcoin Mania”, mpampiasa tsy fahafaliany nitombo ny tambajotra raisintsika: fifanakalozana, anisan'izany Coinbase sy GDAX, tsy afaka hiatrika ny firaketana an-tsoratra tinady ka lasa ivelan'ny aterineto, saram raharaham-barotra sy ny fanamafisana ny fotoana dia nitombo. Tamin'ny tapaky ny volana Janoary, mpanjifa naniraka Coinbase Tale Jeneralin'ny Bryan Armstrong fanangonan-tsonia izay nanangona mihoatra noho ny 12,000 sonia, miantso fanohanana ny SegWit ho toy ny laharam-pahamehana ho an'ny 2018. Jameson Race, ny injeniera nitarika ny BitGo crypto kitapom-batsy, niantso ny fialana amin'ny Coinbase tolotra: “Tsy dia hita fa mahatonga ny overloads lehibe ao amin'ny tambajotra Bitcoin toy izany dia vokatry ny asa malaza tahaka Blockchain.info, Coinbase sy Gemini, izay mampiasa ny andian-tsoratra inefficiently toerana. Raha tsy te-handray anjara amin'izany, aza mampiasa izany. ” Armstrong indray namaly ny anjara-raharaha, nilaza fa “Coinbase dia miasa amin'ny packetizing varotra, SegWit sy ny maro hafa tetika mba hanafoana ny stagnation ao amin'ny tambajotra.”
SegWit mikendry ny hamahana ny olana amin'ny alalan'ny fampihenana scalability mitovy habe amin'ny fifanakalozana. Ny fifanarahana dia nanolo-kevitra ny developer ny Blockstream Peter Wellle, ary ny softphone izay nanao azo atao ny fampiasana ny SegWit, nitranga tao amin'ny tambajotra Bitcoin tamin'ny Aogositra tamin'ny taon-dasa. Anisan'ny asa izay efa manohana ny teknolojia – mpanjifany masiaka natao tamintsika, azo antoka, Metaly sy ny Samourai Wallet, ary koa ny fifanakalozana Crypto-HitBTC, ShapeShift sy Bitstamp. Mba hahatakatra ny fomba SegWit manampy ny Bitcoin Network, dia ilaina ny sary an-tsaina eo amin'ny ambaratonga tsotra ny fahazarana andavanandro ny bitcoin-varotra izay mandeha amin'ny alalan'ny tambajotra Bitcoin amin'ny endrika “fonosana vaovao”, sy ny maha-azo itokiana sy araka ny marina ireo teny amin'ny nodes. Raha ny nodes rehetra manaiky fa ny raharaham-barotra marina, Avy eo dia nisy fifanarahana dia tonga. Ny raharaham-barotra mihitsy dia ahitana ny roa: fahan'ny sy ny output – “fahan'ny” ary “Fivoahana”, izay ny ampahany voalohany no tompon'andraikitra “mamoha”, izay, ny fahazoana BitCoins (ary ahitana vaovao momba ny mpandefa), ary ny faharoa – for “Fanidiana” fa mety ho avy entana. Ny angona fahan'ny ahitana ihany koa ny sonia fanamarinana ny taratasy avy amin'ny tsy miankina sy ny fanalahidy-bahoaka.
SegWit teknolojia (Segregated Vavolombelona) mamaky ny raharaham-barotra ho faritra roa sy famindrana ny fanaovan-tsonia (“vavolombelona”) ilaina ny “hamaha” ny nahazo BitCoins, hatramin 'ny farany ny raharaham-barotra, ivelan'ny tena sakana. Raha izany dia, ny tena sampana misy angon-drakitra momba ny mpandray sy ny mpandefa, ary ny “vavolombelona” Misy soratra sy ny sonia, izay, fampahalalana izay ilaina mba hahazo antoka ny raharaham-barotra, nefa tsy ho ampiasaina. Ny soso-kevitr'izy izay nipetrahan'ny momba ny sonia 60% ny raharaham-barotra boky, ny fitokana-monina mampihena be ny andian-tsoratra habe, mitombo amin 'izany ny tambajotra passante sy ny fampihenana ny vola lany amin'ny fiampangana barotra.
Blockchain News 9 Janoary 2018
Previous Post:Coincheck manambara refunds manomboka amin'ny herinandro ambony
Next Post:Mario Draghi: Bitcoin lalàna dia tsy andraikitry ECB
Mey 3, 2018 amin'ny 7:15 AM